Norvezy. Manambady ny zavatra iraisam-pirenena Mampiaraka toerana - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Norvezy. Manambady ny zavatra iraisam-pirenena Mampiaraka toerana
Mpanjaka Harald, Ny Praiminisitra Erna Solberg
ny firenena any Eoropa Avaratra, any amin'ny faritra Andrefan'ny-Pianakaviana Peninsula sy ny be sy ny maro mifanakaiky amin'ny Pianakaviana Peninsula, Nosy kely sy Spitsbergen (Svalbard), ny vondro-Nosy Jan Mayen sy Mitondra ao amin'ny oseana arktikaAmpitan-dranomasina faritry ny Norvezy dia Bouvet nosy any Atsimo ranomasimbe Atlantika. Koa, Norvezy milaza ny faritry ny tany amin'ny tendrontany atsimo eo amin'ny Fivoriambe ny sivy ambin'ny folo ny nosy ny i Petera sy ny vadin'ny Mpanjaka, Maud Tany. Norvezy no sisin-tany amin'ny firenena telo: ny Soeda ny Atsinanana, Finlande sy Norvezy any Avaratra-Atsinanana. Ny firenena dia nanasa ny Barents-dranomasina any Avaratra-Atsinanana, ny zavatra ranomasina tao Andrefana sy Avaratra ranomasina any atsimo andrefana. Ny firenena ny anarany dia avy amin'ny teny anglisy teny Endrika ny governemanta dia ny fitondram-panjaka araka ny lalampanorenana, ny endriky ny governemanta unitary. Norvezy dia mizara ho sivy ambin'ny folo fivondronana (faritany), izay mitambatra ao anatin'ny fototra tsy ara-potoana any amin'ny faritra.
Ny renivohitry ny Norvezy sy seza ny governemanta, Oslo
Norvezy dia ny Tavaratra pasipaoro Union sy ny faritra Schengen. Avy amby roapolo i Norvezy tampon'ny ny lisitra ny firenena amin'ny fampandrosoana ny mahaolombelona. Ny firenena iray manontolo no tena faritra be tendrombohitra, dia teny be lembalemba, ahitana ny gneiss, granita sy ny hafa ny saha amin'ny Archean sy Paleozoic vanim-potoana any amin'ny faritra Atsinanan'i izany dia nisavasava amin'ny lohasaha lehibe, ary ny eo amin'ny Andrefana sy Avaratra lalina any amin'ny tany an-dranomasina fjords. Any amin'ny toerana maro ny tendrombohitra dia boribory, ary ny tontolo dia ankamaroan'ny endrika lehibe undulating lembalemba, izay lohasaha sy ny bays toa tena tsy ampy taona triatra. Ny fitambaran'ny faritra voabodo ny firenena, sivy amby telopolo km mandry etsy ambony m ambonin'ny haavon'ny ranomasina km amin'ny haavon'ny avy dimam-polo amby M. ny eo ho eo ny hahavony ambonin ny ranomasina ambonin'ny iray manontolo toerana ny Norvezy mahatratra efa-polo amby sivy metatra. ao amin'ny fomba fijery io, ny isan'ny olona ampiasaina, na dia mety ho an'ny fambolena ny tany dia maneho ny tena ampahany kely iray manontolo toerana: vao efa-polo-km dia ny tany azo ambolena.
dimy amby telo-polo km ary dia ny mponina an-tendrombohitra, swamps, sns, km vongan-dranomandry.
Raha tianao Norvezy ary te-hanambady ny anarana, - Pianakaviana Mampiaraka toerana ny Mampiaraka dia hanampy anao mba hahatakatra ny nofy.
Sievietes vecumā: Bezmaksas iepriekšēja reģistrācija
lahatsary internet aterineto tsy misy fisoratana anarana chatroulette ny lahatsary amin'ny chat fisoratana anarana maimaim-poana mba hahafantatra ho an'ny lehibe sy ny fifandraisana amin'ny chat roulette an-tserasera avy amin'ny finday tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat online fampitana tsy misy fisoratana anarana finamanana online watch video internet video Mampiaraka sexy ny lahatsary amin'ny chat